Lionel Messi oo si xur ah Barcelona ku macsalaamayn karo - Somgoal
Home Laliga Lionel Messi oo si xur ah Barcelona ku macsalaamayn karo
Laacibka kooxda kubada cagta Barcelona ayaa si xurnimo uga tagi kara kooxdiisa kadib markii uu heshiiska uu kula joogay dhamaaday.
Xidiga kubada cagta aduunka ayaa ku ekaa heshiiskiisa sabtidii 30 ka may midkaasoo soo bilowday 2017, taasoo sababi karto inuu si xurnimo ah uga dhaqaaqo koox kale ayadoo wax lacag kala wareeg la bixin waa hadii uu rabo.
Barcelona ayaa aaminsan in 32 jirkaan uu ku sii joogi doono heshiiskaan lkn ugu yaraan shan sano kale sii joogi doono sida uu sheegay Josep Maria Bartomeu madaxwaynaha kubada cagta Barcelona.
Bartomeu ayaa usoo bandhigay Messi heshiis abid ah sidii midkii loo soo bandhigay Andres Iniesta, ayadoo rajeynayo inay wada hadalada bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Hubaantii waa wax ay rajaynayaan dhamaan kooxda hadii uu Leonel Messi dareemayo awood iyo hami si uu heshiiskiisa u dheereeyo kooxda sidaas waxaa yiri madaxwaynaha kubada cagta ee Barcelona.
Ugu danbaytii isaga ayaa wax walbo go´aansan dono. Waa uu mataystay,xag ayuu u leeyahay inuu go´aansado hadii uu joojinayo inuu ciyaaro kabada cagta. Laakiin waxa uu rabaa inuu kusoo gabagabeeyo waayihiisa ciyaareed Barcelona.
Labada sano soo socoto ama sedexda sano soo socoto waxa uu ahaan doonaa hogaamiyaheena wax shaki kama taagna inuu wali yaryahay, inuu xoogan yahay iyo inuu wali hami ka leeyahay kubada cagta sidaas waxaa sheegay madaxwaynaha Barcelona.
Previous articleDavid Luiz oo rabo inuu sii joogo Arsenal
Next articleKooxda Tottenham ayaa xaqiijisay in kooxdeeda laga helay caabuqa Coronavirus.